၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်တွင်ထိပ်တန်း K-Pop အမျိုးသားလူသစ်သရုပ်ဆောင်ဆု ၇ ခုသည်မဲဆန္ဒရှင်များအားမဲပေးခဲ့သည်၊ YG, JYP၊ | ကိုရီးယား၏ဆိုးလ်
News1 နှစ်ကုန်စစ်တမ်းအမည်ရှိကိုးရီးယားသတင်းမီဒီယာတစ်ခုတွင် K-Pop အေဂျင်စီ ၂၂ ခုမှကိုယ်စားလှယ်များသည် ၂၀၂၀ ခုနှစ်အတွက်အကောင်းဆုံးလူသစ်လူငယ်အဖွဲ့များနှင့် ပတ်သက်၍ သူတို့၏ထင်မြင်ချက်များကိုမဲပေးရန်တောင်းဆိုခဲ့ကြသည်။ SM, JYP, YG, Big မှဒါရိုက်တာများ၊ မန်နေဂျာများ၊ စီအီးအိုများ Hit နှင့် K-Pop လူငယ်အုပ်စုများကို ပို၍ အဆင့်သတ်မှတ်ခဲ့သည်။ ဤတွင်သူတို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြသည်။
4. P1 သဟဇာတ & MCND
P1Harmony နှင့် MCND သည်တစ် ဦး ချင်းစီအတွက်တစ်မဲစီရရှိခဲ့ပြီး ၄ ယောက်ကိုအကောင်းဆုံးအမျိုးသားဆုဆွတ်ခူးသူများဖြစ်သည်။
P1 သဟဇာတဖြစ်မှုကနေအဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ဖြစ်ပါတယ် FNC ဖျော်ဖြေရေး။ သူတို့ဟာ ၂၀၂၀၊ အောက်တိုဘာ ၂၈ ရက်မှာသူတို့ရဲ့အယ်လ်ဘမ်အသေးစားနဲ့အတူပွဲထုတ်ခဲ့ကြတယ်၊ Disharmony: ထွက်မတ်တပ်ရပ်။ ၎င်းတို့၏ mini album သည်လက်ရှိတွင် album ၂၂,၄၀၀ ရောင်းချခဲ့သည်။
Youtube ကိုကြည့်ရှုသူပေါင်း ၁၁ သန်းကျော်ရှိခဲ့ပြီးအဖွဲ့ရဲ့ပထမဆုံးသီချင်းဖြစ်တဲ့ Siren သီချင်းဟာကြီးမားတဲ့အောင်မြင်မှုတစ်ခုရရှိခဲ့ပါတယ်။ အုပ်စုသည်သူတို့၏ပွဲ ဦး ထွက်တွင်တီထွင်မှုများပြုလုပ်ခဲ့သည်။ P1H: တစ်ကမ္ဘာသစ်စတင် တ ဦး တည်းအကြီးအအောင်မြင်သောဥပမာဖြစ်ခြင်း။
ထံမှ MCND TOP မီဒီယာ သူတို့ရဲ့ပထမ ဦး ဆုံး mini ကိုအယ်လ်ဘမ်နှင့်အတူပွဲ ဦး ထွက်, ရေခဲခေတ်သို့ ၂၀၂၀၊ ဖေဖော်ဝါရီ ၂၇ ရက်။ အုပ်စုသည်လူကြိုက်များမှုနှင့်ပရိသတ်များမပေါ်မီသူတို့သည်ရှင်သန်မှုအမျိုးမျိုးပြပွဲများတွင်ပါ ၀ င်ခဲ့သည် ပန်ကာ နှင့် 19 လက်အောက်တွင်.
သူတို့၏အိုင်ပီလိပ်စာဖြစ်သော Ice Age သည် hip-hop အမျိုးအစားခေါင်းစဉ်ကိုယနေ့ခေတ်တွင်ကြည့်ရှုသူပေါင်း ၂၃ သန်းကျော်ရရှိခဲ့သည်။
MCND သည်သြဂုတ်လ ၂၀ ရက် ၂၀၂၀ တွင်နောက်ထပ်အယ်လ်ဘမ်အသေးစားတစ်ခုထွက်ပေါ်လာသည်။ကမ္ဘာမြေ“ ထိုအချိန်ကတည်းကအယ်လ်ဘမ်သည် (Hanteo) အယ်လ်ဘမ် ၂၅၀၀၀ ကျော်ရောင်းချခဲ့သည်။
၃။ DRIPPIN & Lim Young Woong
DRIPPIN နှင့် Lim Young Woong တို့ကတတိယနေရာတွင်အတူတကွယှဉ် တွဲ၍ အကောင်းဆုံးအမျိုးသား Rookies များအတွက်မဲ ၂ ခုစီရရှိခဲ့သည်။
DRIPPIN သည်အဖွဲ့မှ K-Pop ကောင်လေးဖြစ်သည် Woollim ဖျော်ဖြေရေး၂၀၁၂ ခုနှစ်အောက်တိုဘာ ၂၈ ရက်တွင်သူတို့၏ပထမဆုံးအယ်လ်ဘမ်အသေးစားနှင့်အတူမိတ်ဆက်ခဲ့သည်။ “ Boyager”။ ယနေ့ခေတ်တွင်သူတို့၏ mini album သည်မိတ္တူပေါင်း ၄၄,၂၀၀ ကျော် (Hanteo) ကိုရောင်းချခဲ့ပြီး iTunes album ဇယားတွင်နိုင်ငံအတော်များများ၌နံပါတ် ၁ အထိပင်ရောက်ရှိခဲ့သည်။
သူတို့၏ Nostalgia သီချင်းသည် Youtube ပေါ်တွင်ကြည့်ရှုသူပေါင်း ၁၀ သန်းကျော်ရရှိခဲ့သည်။ ဒါဟာမနက်ဖြန်ပို။ ပင်ဖြစ်လိမ့်မည်။
အနိုင်ရပြီးနောက် မစ္စတာ Trot ရှင်သန်မှုပြပွဲဒီနှစ် 2020, တစ်ကိုယ်တော် Lim Young က Woongသူသည် ၂၀၁၆ ခုနှစ်တွင် "Hate You" အမည်ရသီချင်းတစ်ပုဒ်ဖြင့်နာမည်ကျော်ကြားခဲ့သည်။
၂၀၂၀ ခုနှစ်3ပြီလ ၃ ရက်တွင်ထုတ်ဝေခဲ့သောသူ၏နောက်ဆုံးထုတ် single trust“ Trust in Me” သီချင်းကို Youtube တွင်ကြည့်ရှုသူ ၁.၁ သန်းကျော်ရရှိခဲ့သည်။ သီချင်းကသူ့ကိုရရှိခဲ့သည် Genie ဂီတဆု နှင့် ဖရဲသီးဂီတဆု အကောင်းဆုံး Trot သီချင်းအမျိုးအစား၌တည်၏။
မဲလေးမဲရရှိပြီးနောက် ENHYPEN သည်အကောင်းဆုံးအမျိုးသားသင်တန်းများတွင်ဒုတိယနေရာတွင်ရှိသည်။
BE: LIFTENHYPEN ၏ပထမ ဦး ဆုံးအယ်လ်ဘမ်နှင့်အတူပွဲထုတ်ခဲ့သည်။ နယ်စပ် - တစ်နေ့ ၂၀၂၀၊ နို ၀ င်ဘာ ၃၀ ရက်နေ့တွင်။ I-LAND တွင်ပါဝင်ပြီးနောက်အဖွဲ့သည်ပရိသတ်ကြီးကျယ်ခမ်းနားသောအခြေစိုက်စခန်းတစ်ခုကိုတည်ဆောက်ခဲ့သည်။ ၎င်းသည်အလွန်ကောင်းမွန်သောသူတို့၏အယ်လ်ဘမ် (Hanteo) မိတ္တူ ၃၀၇,၄၀၀ ကျော်ကိုရောင်းချရန်ခွင့်ပြုခဲ့သည်။
သူတို့၏ခေါင်းစဉ်ဖြစ်သောသီချင်း“ Given-Taken” သည် ၂၄ နာရီအတွင်းလူငယ်အုပ်စု ၂၀၂ ပွဲ၌ဂီတဗီဒီယိုကိုအများဆုံးကြည့်ရှုနိုင်ခဲ့သည်။ Youtube တွင်ကြည့်ရှုသူသန်း ၂၀ ကျော်ရှိသည်။ သင်ဖတ်ရှုသည့်အချိန်တွင်၎င်းသည်ပိုမိုအောင်မြင်လိမ့်မည်။
တစ်ခုချင်းစီကိုမဲ ၆ ခုစီရရှိပြီး TREASURE and CRAVITY သည်အကောင်းဆုံးအမျိုးသား K-Pop လူရွှင်တော်များစာရင်းတွင်ပထမနေရာ၌ရပ်တည်ခဲ့သည်။
ဘဏ္fromာတော်ကနေ YG Entertainment က ၂၀၂၀ ခုနှစ်သြဂုတ်လ ၇ ရက်တွင်စတင်မိတ်ဆက်ခဲ့သည်။ ပထမခြေလှမ်းအခန်း ၁ မိတ္တူပေါင်း ၁၉၀,၀၀၀ ကျော် (Hanteo) ကိုရောင်းချခြင်းဖြင့်၎င်းအောင်မြင်မှုသည် Hanteo ဇယားကိုရရှိခဲ့သည် ကုတ်ဒွန်ကန ဦး တစ်ပတ်အတွင်းမိတ္တူ ၁၀၀၀၀၀ ကျော်ရောင်းရန်ထောက်ခံချက်။
ဒီနေ့မြန်မြန်ရှေ့သို့ Youtube တွင်ကြည့်ရှုသူပေါင်း ၅၆ သန်းကျော်ရှိသည်
ထို့အပြင်၎င်းတို့၏တစ်ခုတည်းအယ်လ်ဘမ်အဆိုပါ ပထမအဆင့် - အခန်း ၂ 186,000 ကျော်မိတ္တူကိုရောင်းခဲ့သည် ပထမအဆင့် - အခန်းသုံး ကျော် 185,000 မိတ္တူရောင်းချခဲ့သည်။
Youtube ကိုကြည့်ရှုသူပေါင်း ၂၆ သန်းကျော်ရှိသည့် Mmm သည်ကြည့်ရှုသူပေါင်း ၄၇ သန်းနှင့်“ I you you” ကိုကြည့်ခြင်းအားဖြင့် Youtube ပေါ်တွင်ကြည့်ရှုသူအများဆုံးအရေအတွက်အတွက်စံချိန်ကိုချိုးမည်။
မှ CRAVITY Starship ဖျော်ဖြေရေး သူတို့၏ပထမ ဦး ဆုံးအယ်လ်ဘမ်ဖြစ်သော Season 1 Hideout: onပြီလ ၁၄ ရက်၊ ၂၀၂၀ ခုနှစ်14ပြီလ ၁၄ ရက်နေ့တွင်ပြသခဲ့သည်။ ထိုအချိန်မှ စ၍ သူတို့သည်အထင်ကြီးလောက်သောမိတ္တူ ၉၁,၈၀၀ (Hanteo) ကိုရောင်းခဲ့ကြပြီးလူသစ် K အတွက်တစ်ပတ်အတွင်းအရောင်းအများဆုံးဖြစ်ခဲ့သည်။ -Pop ယောက်ျားလေးအုပ်စုများ။
သူတို့ရဲ့ခေါင်းစဉ်လမ်းကြောင်း "စည်းကမ်းအားလုံးကိုချိုးဖောက်ပါYouTube တွင်ကြည့်ရှုသူပေါင်း ၁၃ သန်းကျော်ကျော်ခဲ့သည်။
၂၀၂၀၊ သြဂုတ်လ ၂၄ ရက်နေ့တွင် CRAVITY သည်သူတို့၏ဒုတိယအယ်လ်ဘမ်သစ်ကိုထုတ်ဝေခဲ့သည်။ ရာသီ ၂။ ဖျောက်ထားခြင်း၂၀၂၀၊ သြဂုတ်လ ၂၄ ရက်နေ့တွင်၎င်းသည်အုပ်ရေ ၁၂၂,၉၀၀ ကျော်ရောင်းချပြီးသည်။ သူတို့ရဲ့နောက်ဆုံးပေါ် single "မီးတောက်” YouTube တွင်ကြည့်ရှုသူပေါင်း ၁၄ သန်းရှိခဲ့ပြီးသင်ဖတ်ရှုသည့်အချိန်ထက်ကျော်လွန်လိမ့်မည်။
source: မှပို့စ်တစ်ခု News1
လွန်ခဲ့သောGundun ဘူတာနှင့်ဗိသုကာ 101 건축학개론
နောက်တစ်ခုKim Jong Kook သည် Daesang ကို 2020 SBS Entertainment Awards တွင်အနိုင်ရရှိခဲ့သည်
Kim Jong Kook သည် Daesang ကို 2020 SBS Entertainment Awards တွင်အနိုင်ရရှိခဲ့သည်
Krystal နဲ့ Kim Jae Wook တို့ဟာကိုရီးယားဒရာမာဇာတ်လမ်းတွဲအသစ်မှာပါဝင်သရုပ်ဆောင်နိုင်ခဲ့ပါတယ်
ဇူလိုင်လ 27, 2021
Jeon So Min သည်သူမမှတ်မိဆုံးသောပရိသတ်ကိုသတိရသည်
၂၀၂၁ ခုနှစ်ဇူလိုင်လမှ စ၍ Spotify ၌လူကြည့်အများဆုံး K-pop သီချင်း ၃၀